Soo dejisan ComboFix 17.9.14.1 – Vessoft
Soo dejisan ComboFix
ComboFix – software ah u Wakiil ah oo ka mid ah fayrasyada iyo spyware. software ayaa si toos ah uu baaritaanku nidaamka iyo ogaadaa fayrusyada ugu badan, oo korkoodana waxaa abuuraa wararka text on natiijada scan ah. Combofix kuu ogolaanayaa inaad tirtirto ku faylasha, fayl, entries diiwaanka ku meel gaar ah iyo xaasidnimo, iwm software waa awood si ay u abuuraan nidaam celin dhibic oo gurmad diiwaanka. Combofix ka kooban a febwari dabacsan ee goobaha skaanka.
Soo saarida fayrusyada caadi
Nidaamka scan taxadir
Nadiifinta nidaamka ka mid ah qashinka
Abuuraa nidaam celin dhibic
ComboFix Software la xiriira:
software The si uu u ilaaliyo xogta shakhsiga hanjabaadaha shabakadda. Adda wuxuu bixiyaa difaac ah ka gees ah ku furin iyo spyware.
Software uu ka soo kabsanayo faylasha lumay ama si qalad ah la tirtiro ee noocyada kala duwan. Sidoo kale software awood u inuu ka soo kabsado xogta ka e-mail oo la qaadi karo ee sidayaal xogta.
Dia 0.97.2-2 Standard iyo 0.97.2 Portable
Software in ay ka shaqeeyaan la qorsheyaasha ee heerarka kala duwan ee ku adag tahay. Sidoo kale waxa ay taageertaa Warkan oo shaqada lakab.
software The lagu shido, CD DVD, HD-DVD iyo Blu-Ray. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan faylasha ISO iyo cajaladaha Downlaods.
editor The MFT inuu Abuuro wax kulan 2D illi iyo kakanaanta kala duwan. software wuxuu bixiyaa habka a horumarinta fududeeyay dadka isticmaala aan xirfadaha barnaamijyada.